Madaxweynaha dalka iyo dhigiisa Maraykanka oo ka wadahadlay ganacsiga iyo amniga – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka iyo dhigiisa Maraykanka oo ka wadahadlay ganacsiga iyo amniga
Hoggaamiyaha dalka Uhuru Kenyatta oo shalay aqalka cad ee Maraykanka kula kulmay dhigiisa wadankaasi Donald Trump ayaa waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sida labada dal ay isaga kaashan karaan arrimaha ganacsiga iyo amniga.
Waxay si gaar ah diiradda u saareen xoojinta cilaqaadka ka dhexeya Kenya iyo Maraykanka ee dhanka ganacsiga iyo dalxiiska ah iyadoo dhanka kale la wanaajinayo amniga geeska Afrika.
Mr. Kenyatta , madaxweynaha dalka dalka ayaa sheegay in Maraykanku uu yahay saaxiib dhow oo gacan weyn ka geystay la dagaalanka falalka argagixisada.
Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray inuu Maraykanka kala dhexeyo xiriir soo jireen ah oo ku aaddan wax ka qabashada arrimaha amniga iyo gaashaan dhigga, wafdiga uu hoggaminayana ay halkaasi u joogaan in sido kale sara loo sii qaado ganacsiga iyo maalgashiga.
Mr. Donald Trump, madaxweynaha Maraykanka ayaa dhigiisa Kenya uga mahadceliyay inuu aqbalay casuumaadii uu u fidiyay.
Labadan mas’uul ayaa sido kale isla soo hadal qaaday faaiidada laga dhaxlayo in laga bilaabo bisha tobnaad ee sannadkan diyaaradaha shirkadda duulimaadyada ee Kenya Airways ay si toos ah ugu kala gooshaan magaalooyinka Nairobi iyo New York.
Madaxweynaha dalka ,Uhuru Kenyatta ayaa sido kale goob joog ka ahaa heshiis la wada saxiixday oo Maraykanka uu gudaha dalka ka sameynaya maalgashiga ku kacaya dhaqaale gaaraya 238 milyan oo doolar una dhiganta 23 bilyan oo shilin.
← DHAGEYSO Warka subaxnimo ee idacaada star fm 8:00 PM
DHAGEYSO Biyo la’aan baahsan oo ka jirta deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud. →